बुढीगण्डकीमा भट्ट माफियाको चलखेल
काठमाडाैं । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोके ।
२५ अर्बमा ४१ हजार ७ सय रोपनी अधिग्रहण
आयोजनाले हालसम्म कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ४१ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसबापत झण्डै २५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजना पुनर्वास तथा पनस्र्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँ तथा बजार क्षेत्रका गोरखातर्फ ६ सय र धादिङतर्फ ५ सय घर अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार अघि बढे अब थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छैन । अधिग्रहण भएकै जग्गामा हालसम्म विस्थापनमा पर्नेहरूलाई पनि पुर्नवास गर्न सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्ताव छ ।
२०४० : अध्ययन सुरु
२०६८ : तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अघिग्रहणलगायत काम सुरु ।
२०६९ : विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालिन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन ।
२०७१(कात्तीक): १२ सय मेगावाट क्षमतामा बुढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलद्वारा समितिले हस्तान्तरण । २ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान ।
२०७१ (कात्तीक) : तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन
२०७३ (१५, जेठ) : तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ पूर्वधार कर उठाउने व्यवस्था लागू
२०७३ (साउन) : तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
२०७४(९, जेठ) : तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी(सीजीजीसी)लाई दिने निर्णय ।
२०७४ (२१, जेठ) : इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी ।
२०७४(१९, भदौ) : ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र ।
२०७४ (असोज) : सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालिन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन ।
२०७४ (२७, कात्तीक) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज ।
२०७४ (१, मंसिर) : समझदारी तोड्नु परे दुबै पक्षले एकअर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जामन्त्रालयलाई पत्र ।
२०७४ (४, मंसिर) : तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय ।
२०७४(८ मंसिर) : लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवि नेपाल, अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य ।
२०७४ (३, पुस) : स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बुढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटिको सूझावसहित प्रतिवेदन पेश । पहिलो– स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकिने । र, तेस्रो– विकल्पका रूपमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव । २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान ।
२०७४ (२६ माघ) : स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ।
२०७५ (१ भदौ) : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीले एउटा प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । सो प्रस्तावमा हामीले यसको काम निकै अघि बढाइसकेका थियौं, त्यसैले पुनः यो काम गर्न चाहन्छौं भन्ने विषय उल्लेख थियो । त्यसमा हामीले धेरै अध्ययन पनि गरेका छौं । त्यसैले इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्न चाहन्छौं भनेर उनीहरूले इच्छा देखाएका थिए ।
२०७५ (५, असोज) : मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने गरी निर्देशन ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार १२ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकीलाई आठ सयमा झार्ने तयारी गर्दै
सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १२ सय मेगावाटबाट ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याउने तयारी गरेको छ । दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको मुआब्जामै १ खर्ब भन्दा बढि खर्च हुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कम लगानी र समयमा आयोजना पूरा गर्ने भन्दै क्षमता खुम्च्याउने तयारी थालेको हो । नयाँ प्रस्तावअनुसार आयोजना अघि बढाउँदा डुबान कम हुने भएकाले अधिग्रहणमा लाग्ने रकमको भार कम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टबेल इन्जिनियिरिङले १२ सय मेगावाट क्षमताको डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यही डिपिआरअनुसार जलाशय र भौतिक संरचनाले विस्थापित गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेका बेला सरकारले क्षमता घटाएर सातदेखि आठ सय मेगावाटको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको क्षमता घटाएर निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘आठ सय मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गरी विस्थापन गर्न लागिएका बजार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई आगामी बजेटमै समावेश गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपी बुढीगण्डकीमा २६३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर फेवातालभन्दा १५ गुणा लामो मानव निर्मित ताल निर्माण गरी त्यसलाई पर्यटनलगायत बहुउपयोगी बनाउने योजना १२ सय मेगावाटकै डिपिआरमा सामावेश छ । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र उर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढ्दा आयोजना नबनेसरह नै घाटा भइरहेको भन्दै बुढीगण्डकी चाँडो निर्माण गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सरकारले आयोजनाको जग्गा अघिग्रहणमा लाग्ने थप रकम आयोजना निर्माणमै लगाउन सकिने तर्क समेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउँदा डुबानमा पर्ने आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजार क्षमता घटाउँदा जोगिनेछन् । ती स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेको छ । यी क्षेत्र डुबानमा नपर्दा अधिग्रहण रकमको भार पनि कम हुनेछ । विस्थापित हुनेहरूलाई पनि हाल मुआब्जा वितरण गरिसकिएको क्षेत्रमै पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
एकातिर १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य, अर्कातिर क्षमता खुम्च्याउने तयारी
सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यको १ वर्ष वितिसकेको छ । तर हाल निर्माणाधिन आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै छ । यसले गर्दा सरकारले प्रत्येक आयोजनालाई उच्चतम लाभ लिन सक्ने गरी विकास गर्ने अवधारणा अधि बढाइरहेको छ । तर, आफ्नै लक्ष्यको विपरीत हुने गरी सरकारले १२ सय मेगावाटमा बहुउदेश्यीय आयोजनालाई ८ सयमा खुम्च्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ ।
६० मेगावाटको त्रिशूली ३ एलाई ९० मेगावाट पुर्‍याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास
चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई भट्ट दाजुभाइले सबैभन्दा बढी विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठेक्का लगाउँदा नै भट्ट दाजुभाइलाई खेल्ने मौका दिए । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनासाथ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनतिर लागे । उनीहरूलाई ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पनि दह्रो साथ दिए ।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्री रहेका उमाकान्त झाबाट क्षमता बढाउने निर्णय गराउन भट्ट दाजुभाइ सफल भए । रेग्मी उनीहरूका नातेदारसमेत हुन् । उनीहरूले निर्माणमा गइसकेको आयोजनालाई क्षमता वृद्धिको निर्णय गराएर निर्माण अनिश्चित बनाए । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । सुरुको डिजाइनमा भूमिगत रहेको विद्युत्गृहलाई सतही बनाउन पनि भट्ट दाजुभाइले सक्दो प्रयास गरे ।
चिलिमेमा धोका दिएका कारण प्रवद्र्धक कम्पनी कालोसूचीमा
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुने ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माणका लागि भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)ले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्‍यो । ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको गेजुवाले बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसले आयोजना निर्माण ढिला सुरु भयो ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा अयोग्य घोषणा ग¥यो । सिजिजिसीले बिड सुरक्षणबापत राखेको तीन करोड २० लाख पनि सान्जेन कम्पनीले जफत गर्‍यो । सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्न सान्जेन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्‍यो ।
तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका भट्ट दाजुभाइ गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै बनाउन सफल भए । उनीहरूले संस्थालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाए ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुनका सचिवलाई संविधानविपरीत ऊर्जामा ताने तत्कालीन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका वेला भट्ट दाजुभाइ संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन सफल भए । आफ्ना कानुनी सल्लाहकार क्षेत्रीलाई उनीहरूले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन पनि प्रयास गरेका थिए ।
सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टालाई भट्ट दाजुभाइले सुरुबाटै विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीकोे दबाबमा
परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिस गरेको ठेक्काको मापदण्ड परिवर्तन गरी भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बाटो खोलिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नै नपर्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्री र सचिवले मापदण्ड परिवर्तन गरी जागुअरलाई छिराएका थिए ।
सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिलाई ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव क्षेत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । करिब २७ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेकेदार छनोट गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि भट्ट दाजुभाइले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरे । उनीहरूको कार्कीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो ।
करिब २७ करोड अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । श्रेष्ठ अहिले भट्ट दाजुभाइसँगै काम गर्छन् ।
कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, सञ्चालक सुरज लामिछाने र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले स्पष्टीकरण लिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । अख्तियारको विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।
भट्ट दाजुभाइ नै स्थानीय एजेन्ट रहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) कम्पनीले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो ।
भारतबाट बिजुली ल्याउन तीन सब स्टेसन बनाउने ठेक्का बीचमै अलपत्र पारे
भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार र मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले पायो । तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणसँग भरतपुर–बर्दघाटको ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउनुपर्ने र जफत गरेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्दै काम नगरेपछि सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का तोडिएको थियो ।
मर्स्याङ्दीकरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का लियो, सम्झौता गर्न आएन
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्ेटसनको निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी सेन्छेन फ्राड इलेक्ट्रिकले पायो । तर, सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी ठेक्का समझौता गर्न नै आएन । यसले गर्दा आयोजनाको निर्माण लम्बियो । प्राधिकरणले अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन सुरु नै भएन
तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले पाएका थिए । कम्पनीले आयोजनाअन्तर्गतको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने करिब ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, जडान र सञ्चालनकको ठेक्का पाएको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग ठेक्का तोडी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पनि जफत गरिएको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग एक करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो ।
बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम पनि सन्तोषजनक छैन
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने ठेक्का पनि ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले नै पाएको छ । कम्पनीको काम त्यहाँ पनि सन्तोषजनक नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसनको काम अति सुस्त
मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनअन्तर्गतको काठमाडौंको मातातीर्थमा सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पनि सेन्छेन फ्राड इलेक्ट्रिकले पाएको छ । कम्पनीको काम सन्तोषजनक नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र
हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी आइकोम टेली लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीले प्रसारण लाइनको निर्माण अलपत्र पारेको छ ।
राजनीतिक पहुँचमा डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिए
राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्दै भट्ट दाजुभाइ ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ र १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफू स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलाउन सफल भएका छन् । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार ०६:५०:०० मा प्रकाशित
सीएमसीले छाडेपछि मेलम्चीमा पूर्वमाओवादीलाई ‘चिठ्ठा’
काठमाडौं, ८ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई बिनाप्रतिस्पर्धा धमाधम ठेक्का दिन थालेको छ। आयोजनाले साविकको ठेकेदार